ပါးကွက်လေး နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ပုရိသတွေကို ဖမ်းစား လိုက် ပြန်တဲ့ မျက်ဝန်း – Shwe Sar
ပါးကွက်လေး နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ပုရိသတွေကို ဖမ်းစား လိုက် ပြန်တဲ့ မျက်ဝန်း
By Shwe S NPosted on November 13, 2021 November 13, 2021
ပုံလေးတွေတိုင်း မှာ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ခပ်ချေချ ရိုက် ထားတဲ့ ပုံလေးကို ” ပါးကွက်လေးပါ ပျက်သွားတဲ့ထိ တရှိုက်မက်မက် နမ်းမယ့်သူ ??” caption လေးတဲ့ တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊ မ်ာဒယ်မျက်ဝန်းရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက် တယ်နော်။
မြင်သူ တိုင်းငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ် ထင် ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိ လာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှုရရှိထားတာပါ။
ပုံလေးတှတေိုငျး မှာ မျောဒယျမကျြဝနျး တဈယောကျ ဆှဲဆောငျမှု ရှိရှိနဲ့ လနျးလှနျးနတော လညျးဖွဈပါတယျ။သူမကတော့ ခပျခခြေ ရိုကျ ထားတဲ့ ပုံလေးကို ” ပါးကှကျလေးပါ ပကျြသှားတဲ့ထိ တရှိုကျမကျမကျ နမျးမယျ့သူ ??” caption လေးတဲ့ တငျပေးလာတာပဲဖွဈပါတယျ၊၊ မျာဒယျမကျြဝနျးရဲ့ အလှ ပုံရိပျလေးတှကေို ပရိတျသတျတှေ အတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေး လိုကျ တယျနျော။
မွငျသူ တိုငျးငေးလောကျ တဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျ ကောကျကွောငျး အလှကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မျောဒယျလျမကျြဝနျး ကို သိကွမယျ ထငျ ပါတယျနျော။ မျောဒယျလျလောကကိုဝငျရောကျတာ မကွာသေးပငျမဲ့ ပရိသတျအမြားအပွားရဲ့အားပေးဝနျးရံမှုကို တဖွညျးဖွညျးရရှိ လာတဲ့ မျောဒယျဖွဈပါတယျ ယောကျြားလေး ပရိသတျတှေ ရဲ့ ဝနျးရံ အားပေးမှုရရှိထားတာပါ။
Previous post ဖြူလွှလွှ အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ အလန်းစား ပို့စ်လေးတွေ ချပြ လာ တဲ့ “မျက်ဝန်း”
Next post ပုရိသတွေ ရဲ့ အကြောင်း သီချင်းလေး နဲ့ ပြောပြီး အသည်းယားစရာ ကောင်းလွန်းနေ တဲ့ သဇင်ဦး ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး